Audio နဲ့ Video တွေကို Linux ကနေ Chromecast ကိုဘယ်လိုချရမလဲ Linux မှ
Audio နဲ့ Video တွေကို Linux ကနေ Chromecast ကိုဘယ်လိုချရမလဲ
Luigys toro | | applications များ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
Chromecast ကို ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်း (သို့) ဘရောင်ဇာတွင်ပင်ကူးယူထားသောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီသို့ထုတ်လွှင့်ရန်အသုံးအများဆုံးကိရိယာဖြစ်လာသည်။ Linux သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည့်ဇာတိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ Linux အသံနှင့်ဗီဒီယိုများကို Chromecast သို့လွှင့်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဲ့သို့သော applications များရွေးချယ်ရပေမည် mkchromecast မှဒီကိရိယာကိုသုံးပြီးရုပ်မြင်သံကြားမှာကြည့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလွယ်တကူထုတ်လွှင့်ပေးတယ်။
1 Chromecast ဆိုတာဘာလဲ။
2 mkchromecast ဆိုတာဘာလဲ။
3 mkchromecast ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။
4 Youtube မှ Chromecast သို့သွန်းပါ
၎င်းသည် Wi-Fi ကွန်ယက်တွင်ချိတ်ဆက်ထားသော multimedia ထုတ်ကုန်များမှအချက်ပြမှုကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်အတွက် TV နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော USB drive နှင့်ဆင်တူသည့် HDMI ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများမှပေးပို့သောမာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၎င်းသည် open source tool တစ်ခုဖြစ်သည် Python ကို ပြီးတော့မင်းဘာကိုသုံးတာလဲ node.js, ffmpego avconv အသံနှင့်ဗွီဒီယိုကို Linux မှ Chromecast သို့ရယူရန်။
mkchromecast မှ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးမဆုံးရှုံးစေဘဲကျွန်ုပ်တို့၏မီဒီယာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Chromecast သို့ပို့သည်။ ထုတ်လွှင့်မှုမျိုးစုံ၊ အရည်အသွေးမြင့် 24-bit / 96kHz အသံ resolution၊ YouTube မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ခေတ်မီ Chromecast မော်ဒယ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ဒီကိရိယာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ inbox ထဲမှာပြသတဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသုံးပြုမှု panel ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အလားတူပင်၏ installation mkchromecast မှ ၎င်းသည် Linux distros အားလုံးနီးပါးအတွက်ရိုးရှင်းပါသည်။
မည်သည့် Linux distro တွင်မဆို mkchromecast ကို ၄ င်း၏ source code မှ Github တွင်ထားရှိသော၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
ဒီ tool ၏တရားဝင် repository ကိုပိတ်ထားပါ၊ သို့မဟုတ်၊ ၎င်းကိုမအောင်မြင်ပါက၊ application ၏တည်ငြိမ်သော version ကို download လုပ်ပါ ဒီမှာ.
ကျနော်တို့အသစ်ကပုံတူကူးဖိုင်တွဲကိုသွားနှင့်ဖိုင်နှင့်အတူ pip install လုပ် execute ဆက်လက် requirements.txt ၎င်းတွင် tool တစ်ခုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောမှီခိုမှုအားလုံးကိုပါ ၀ င်သည် (အချို့ကိစ္စများတွင် tool ကို sudo ဖြင့်သုံးရမည်):
Debia, Ubuntu နှင့်ဆင်းသက်လာသောသုံးစွဲသူများသည် tool ကိုတရားဝင် repositories မှတိုက်ရိုက် install လုပ်နိုင်ပြီး console မှအောက်ပါ command ကို run နိုင်သည်။
၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများအနေဖြင့် Arch Linux အသုံးပြုသူများနှင့်၎င်းတို့မှဆင်းသက်လာသူများသည် AUR repository တွင်ရရှိနိုင်သောအထုပ်ကိုသုံးနိုင်သည်
ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှဖြန့်ဝေထားသောအောက်ပါ gif တွင်ဤလျှောက်လွှာ၏အပြုအမူနှင့်အသုံးပြုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်မြင်ယောင်နိုင်သည်။ တရားဝင်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ.
Youtube မှ Chromecast သို့သွန်းပါ
အထူးသဖြင့်ဤအပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာမှာ console မှ YouTube chromecast သို့တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်လွှင့်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မာလ်တီမီဒီယာကို Linux မှ Chromecast သို့လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာနှင့်အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးစေဘဲပို့လွှတ်နိုင်မည့်ကိရိယာတစ်ခုသေချာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Audio နဲ့ Video တွေကို Linux ကနေ Chromecast ကိုဘယ်လိုချရမလဲ
ငါဒီ tool ကို chromecast အတွက်အများကြီးသုံးတယ်၊ ဒီတစ်ခုထက်ပိုပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်။ မည်သည့်ဗီဒီယိုဖိုင်မဆိုသင်ပို့နိုင်သည်
Carlos Moreno ဟုသူကပြောသည်
Multimedia သည်အများကိန်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ "multimedia" လို့ဘယ်တော့မှမပြောသင့်ဘူး။
Carlos Moreno အားပြန်ပြောပါ
ငါရက်ပေါင်းအလားတူတစ်ခုခုရှာဖွေနေခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
Senhor Paquito ဟုသူကပြောသည်
မေးခွန်းကတော့ Firewall ကိုမည်သို့ configure လုပ်ရမည်နည်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Chrome အတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ် ပြင်ဆင်၍ မရပါ၊ ၎င်းသည် (Firewall ပိတ်ထားသည့်) YouTube (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာမှမဆို) အကြောင်းအရာများကိုသာပေးပို့သည်။
Senhor Paquito အားပြန်ပြောပါ
Ubuntu ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ https://github.com/muammar/mkchromecast/wiki/FAQ#i-am-using-ubuntu-firewall-how-can-i-use-mkchromecast-with-it.
တကယ်တော့ငါ Ubuntu ကိုသုံးတယ် (စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကိုပြောဖို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး) ။ အခုမှစပြီးတော့ Firewall ကို Disable လုပ်စရာမလိုပဲ Chromecast ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
ထပ်မံ၍ ပြောချင်ပါတယ်၊ port 5000 ကိုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်လျှင်ပြန်ဖွင့်ပြီး Chrome ကိုဖွင့်ပြီး Chromecast ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် port သည် system level တွင်မှန်ကန်ကြောင်းနှင့်မည်သည့် application ကမဆို content များကိုတစ်ကြိမ်ပေးပို့နိူင်သည်ဟုငါဆိုသည်။ ပွင့်လင်း။
ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခါငါစမ်းကြည့်တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် Firewall သည်စတင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီး၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီတော့ port 5000 ဟာ mkchromecast အတွက်သာဖြစ်တယ်၊
ဟုတ်ပါတယ်။ စိတ်မရှိပါနဲ့။ ငါမှားတာထင်တယ် သို့သော်သီအိုရီအရ firewall ရှိခြင်းနှင့် chrome အသုံးပြုခြင်းပြproblemနာမရှိပါ။ ငါစမ်းသပ်ပြီးမဟုတ်, ငါ Debian ကိုသုံးပါ။ ဟုတ်ကဲ့, port 5000 mkchromecast အတွက်သာလိုအပ်ပါသည်။
တရားဝင် Ubuntu repositories မှ mkchromecast ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်း packet သည် Ubuntu 16.04 repositories တွင်မပါရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ငါတွေ့ခဲ့တာက Ubuntu 16.10 လောက်ပဲရနိုင်တယ်။
နှင့် gentoo distros အတွက် ??
ကျွန်ုပ်၏ Sabayon Linux တွင်မရှိခြင်း၏အဖြေကိုရှာမရပါ။
KodExplorer - ကွန်ရက်ကြည့်ယန္တရားမှ browser ကိုတည်ဆောက်ပါ
OSRFramework ဖြင့် virtual စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါ